जे बर मागे पनि पूरा हुने सुपा देउराली माईकाे दर्शन गरी हेर्नुस् माघ ३ गते साेमबारकाे राशिफल ! - News 88 Post
राशिफल वास्तु ज्याेतिष समाज
January 16, 2022 N88LeaveaComment on जे बर मागे पनि पूरा हुने सुपा देउराली माईकाे दर्शन गरी हेर्नुस् माघ ३ गते साेमबारकाे राशिफल !
माघ ३ गते साेमबारकाे राशिफल
सोमबार धेरै राशिका लागि शुभ रहनेछ र काममा लाभको सम्भावना छ। कुम्भ राशिका व्यक्तिहरुको बोलीको प्रभाव पर्नेछ । आफ्नो दैनिक राशिफल जान्नुहोस्।
मेष: सोमबार भाग्यले साथ दिनेछ। काममा तपाईको प्रदर्शन राम्रो रहनेछ। तपाईमा बोल्ने कला छ जुन तपाईलाई कुनै पनि क्षेत्रमा सफलताको शिखरमा पुर्‍याउन सहयोगी साबित हुनेछ । सोमबार भाग्यले साथ दिनेछ। मिहिनेत गरेर प्रगति हासिल गर्नुहुनेछ।
वृषः सोमबार उत्साहले भरिपूर्ण देखिनेछ, भाग्यले साथ दिनेछ, काममा उत्साह देख्न पाइनेछ । विद्यार्थीले प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ। आफन्त वा परिचित व्यक्तिसँग भेटघाट हुनेछ, जसका कारण अनुहारमा खुशी झल्कनेछ।
मिथुन: मिथुन राशिका लागि सोमबार उत्तम रहनेछ। तपाईको बौद्धिकता र काममा लगनशीलताको अधिकारीहरूले प्रशंसा गर्नेछन्। धेरै साना लगानी भविष्यको लागि लाभदायक हुन सक्छ। साझेदारी व्यवसायमा कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय नगर्नुहोस्। महिलाहरु घरायसी काममा बढी व्यस्त रहनेछन् ।
कर्कट: मनलाई केन्द्रित गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। आर्थिक रुपमा आफूलाई बलियो महसुस हुनेछ । बुद्धिमानीपूर्वक काम गर्नुहोस्, कठिनाइहरू सहज हुनेछन्। युवाले करियरमा ठूलो सफलता हात पार्न सक्छ । राजनैतिक मामिलाहरु पक्षमा सुल्झाउन सकिनेछ ।
सिंह: सोमबार आत्मविश्वासले भरिपूर्ण रहनेछ। मिहिनेतको बलमा प्रतिकूलतालाई जित्न सकिनेछ । घरजग्गाको कारोबारमा निर्णय तपाईको पक्षमा हुन सक्छ। आफ्नो कमाई सावधानीपूर्वक खर्च गर्नुहोस्। परिवारमा सबैलाई सँगै लैजाने प्रयास हुनेछ। सवारी चलाउँदा होसियार हुनुहोस्।
कन्या: भाग्यले साथ दिनेछ, शुभ कार्यमा सहभागी हुनुहुनेछ। तपाईको बोली मिठो हुनेछ, जसका कारण तपाई अरुलाई आफ्नोतर्फ आकर्षित गर्नुहुनेछ। आफ्नो होशियारी र बुद्धिले काम सफल बनाउनुहुनेछ। कार्यक्षेत्रमा अपेक्षित सफलता मिल्नेछ ।
तुला: सोमबार आफ्नो इच्छा अरूमाथि थोप्ने प्रयास नगर्नुहोस्। प्रशासनसँग सम्बन्धित काम सहज हुनेछन् । वर्तमान परिस्थितिले व्यापारिक गतिविधि कमजोर रहनेछ। राम्रा व्यक्तिहरूसँग सम्बन्ध बन्नेछ। तपाईको प्रतिष्ठा र प्रतिष्ठा बढ्नेछ।
वृश्चिक: मन प्रसन्न रहनेछ। परिवारसँग राम्रो समय बित्नेछ, यात्राको मजा लिनेछ। व्यापार व्यवसायमा राम्रो लाभ हुनेछ । सोमबारको दिनको सुरुवात तपाईको लागि राम्रो रहनेछ। हातमा लिएको काममा सफलता मिल्नेछ ।
धनु (धनु) : सोमबारको दिनको सुरुवात राम्रो रहनेछ। काम वा पारिवारिक सुखका लागि तपाईको दिन राम्रो रहनेछ। व्यापारी वर्गले विशेषगरी राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्नेछन्, जसका कारण धन लाभको योग हुनेछ । कार्यक्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन आउन सक्छ ।
मकर: स्वास्थ्यमा सुधार आउनेछ। आफ्नो घरमा बसेर अधिकांश काम पूरा गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। व्यवसायीहरूका लागि समय कठिन हुन सक्छ, तर निराश नहुनुहोस्। अधिकारीहरूले काम देखेर प्रशंसा गर्नेछन्। सासु-ससुराबाट शुभ समाचार प्राप्त हुनेछ।
कुम्भ: तपाईको बोलीबाट मानिसहरू प्रभावित हुनेछन्। व्यावसायिक जीवनमा परिस्थिति तपाईको इच्छा अनुसार हुनेछ। यदि तपाईको व्यवसायको केहि काम लामो समयदेखि रोकिएको छ भने, त्यसलाई सोमबार पूरा गर्न सकिन्छ। साथीभाइसँग गरेको वाचा पूरा गर्न सजिलो हुनेछ।
मीन: काममा बिस्तारै प्रगति हुनेछ। ब्यापार ब्यबसायमा मनग्य लाभ हुने सम्भावना छ । व्यवसायीहरूले ठूलो लगानीबाट बच्न आवश्यक छ। सोमबार केही नयाँ किनमेल हुनेछ। परिवारमा खुशीको वातावरण रहनेछ। ससुरा-ससुराका मानिसहरूलाई भेटेर तिनीहरूको हितको लागि सोध्नुहुनेछ।
Tagged दैनिक राशिफलराशिफलवास्तु ज्याेतिष
के हाेला प्रदेश २ काे नाम, यी हुन् प्रस्तावित ४ नाम र ३ राजधानी (प्रतिवेदनसहित)
January 13, 2022 N88
एमाले महाधिवेशन निर्वाचन आचारसंहिता – मदिरा र मोबाइल निषेध ! (पूर्ण पाठसहित)